Sidina manokana : Nandray fepetra mety amono ny sehapihariana ny fitondrana
lundi, 01 février 2021 07:13
Sary fanehoana ny toerana
Taorian'ilay resaka volamena 73.5kg, dia nandray fepetra ny tompon'andraikitra eo anivon'ny seranam-piaramanidina Ivato mahakasika ny fivezivezen'ireo mpiasa misehatra eo anivon'ny fiaramanidina madinika tsy miankina (Compagnie avions légers) izay nanana vavahady nitokana teo aloha, izay mifanila amin'ny biraon'ny Adema, miditra aty ambadiky ny toby fitehirizan-tsolika Total (ankavia amin'ny sary).
Misy fepetra manokana ny fivezivezena amin'io toerana io, takiana fahazoan-dalana manokana itondrana badge ny toerana, misy sakana ny miditra amin'ny toerana, izay iandraiketan'ny Orinasa fiarovana Amarante.
Nanomboka ny alakamisy 28 janoary 2021 tamin'ny 7ora maraina anefa, dia gaga ny rehetra fa nohidina io vavahady io ka any amin'ny Terminal B, varavarana fihondranana iraisam-pirenena, ho an'izay manana fahazoan-dalana manokana, sy eny akaikin'ny salon Vip, 1000m miala ny vavahady fidirana ho an'ny fiaramanidina madinika tsy miankina, ireo mpiasa rehetra no miditra satria any no misy Portique sy scanner, na ireo fitaovana fitsirihina vatana sy entana.
Mpiasa 450 any no voakasik'io fepetra io, izay mitsinjara amin'ny Orinasa STA - MTA - Fraise - Aeromarine - MAF - TOA - Assist Aviation - Sky Service - GS aviation.
- Filaharana lavareny, maharitra ora maro ny fisavana ;
- Fandehanana an-tongotra lavitra, efa ho 1000m, na ho an'ny mpiasa, na mpanamory, na mpandeha ;
- Mihena arak'izany ny vitrika ananan'ny mpiasa noho ny havizanana milahatra sy dia an-tongotra ;
- Tsy voakarakara tsara intsony ireo mpandeha, izay nandoa vola lafo naka fiaramanidina manokana ;
- Mpandeha manana fikarakarana manokana izy ireo, ary samy manana ny Salon VIP, na toerana fandraisana manokana avokoa ireo Compagnie rehetra ireo, nefa dia any amin'ny Terminal B, iarahana amin'ny rehetra no andraisana azy ;
- Simba arak'izany ny endriky ny Compagnie avion leger, mazava ho azy hialan'ireo mpandeha izay mitaky izay fikarakarana manokana izay, satria arak'izay koa ny sarany aloany.
Misy anefa ny vahaolana :
- Fametrahana portique sy scanner eo amin'ny vavahady avion leger izay efa tokony natao hatramin'izay fa mbola tsy natao, ary andraikitry ny orinasa misahana ny fiambenana sy fisavana ireo mpandeha sy ny mpiasa izany.
- Fametrahana maharitra ny faditseranana na douane, ny Polisy misahana ny sisin-tany, ny orinasa misahana ny sécurité aéroportuaire Amarante, sy izay fepetra fiarovana isan-karazany manaraka ny fenitra iraisam-pirenena.
Eken'ny rehetra, ary takiana mihitsy aza ny fametrahana ny fepetra fiarovana ny harem-pirenena, fiarovana ny mpiasa sy ny mpandeha, ary ny fiaramanidina, fa tokony fepetra mifanentana amin'ny asa fihariana ara-piaramanidina, indrindra fa ireo fiaramanidina madinika hofain'olon-tokana, izay manana ireo fikarakarana manokana azy ireo, fa tsy hametraka fepetra tsy niaraha-nidinika, ka lasa fepetra nanamora ny fiainan'ny mpitantana ny seranam-piaramanidina fotsiny, tsy te hisahirana ametraka ireo fitaovana takian'ny asa matihanina, fa mihonona amin'izay ananana fotsiny.
Takian'ireo mpisehatra eo anivon'ny sidina manokana arak'izany ny :
1- Famohana ny vavahady fidirana any amin'ny avion leger mahazatra (côté bureau Adema) fa mijaly ny mpiasa sy ny mpandeha. Anjaran'ny tompon'andraikitra no mametraka ireo fepetra fisavana ny olona sy ny entana ary ny agent de sureté, na izay olona hitany fa ilaina eo.
2- Rehefa sidina iraisam-pirenena na vol international dia ekena ny fiaingana na fahatongavana (départ - arrivée) atao any amin'ny Terminal B, izay misy ny fitaovana fisavana rehetra mandram-pametrahana ireo fitaovana toy izany any amin'ny fidirana avion leger.
Mila jerena aingana izany ny vokatr'ireo fepetra noraisina, izay tsy nisy fifampiresahana, satria mety hiteraka fampiatona mpiasa, ary hitarika any amin'ny fikatonan'ny orinasa maro izany, izay hiafara amin'ny fandroahana mpiasa, satria ireo mpandeha, izay sarotiny dia sarotiny amin'ny fikarakarana manokana, dia tsy hampiasa ny tolotra ratsy omena azy.
(Sary fanehoana ny toerana)